Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Magacaabista VIP ee eTurboNews » Deepak Joshi, Maamulihii hore ee Dalxiiska Nepal, Nepal
Madaxii hore ee fulinta
Guddiga Dalxiiska ee Nepal
Guddiga Socdaalka (Ururka Safarka Aasiya ee Pacific)
Mr. Deepak Raj Joshi waxa uu u shaqeeyay madaxa fulinta ee guddiga dalxiiska ee Nepal (Ururka Dalxiiska Qaranka ee Nepal) laga bilaabo Diisambar 2016 - Diseembar 2019. Inta lagu jiro 20 sano ee waayo-aragnimadiisa shaqo ee maaraynta goobta, horumarinta dalxiiska, iyo Iskaashiga Dadweynaha iyo Gaarka ah, Mr. Joshi waxa uu la soo shaqeeyay heerar badan oo ah xirfadlayaasha dalxiiska ee Nepal iyo sidoo kale waxa uu leeyahay shabakad wanaagsan oo leh la-hawlgalayaasha caalamiga ah ee ugu sarreeya.
Wax ku biirinta Mr. Joshi ee soo kabashada dalxiiska ee dhulgariirkii ka dambeeyay Nepal ee 2015-ka ka dib ayaa aad loo xusay Waqtigaas, Mudane Joshi wuxuu si guul leh u hogaamiyay Guddiga Soo-kabashada Dalxiiska (TRC) Xoghaynta Nepal iyadoo lala kaashanayay qaybaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah.
Mudane Joshi wuxuu kaloo dan gaar ah ka leeyahay waaxda horumarinta dalxiiska waarta wuxuuna xubin ka ahaa Golaha Fulinta ee Xanaanada Shimbiraha Nepal intii u dhaxeysay 2009 ilaa 2014 wuxuuna sidoo kale ka soo shaqeeyay Pacific Asia Travel Association (PATA) isagoo ka mid ahaa Gudiga Fulinta iyo Gudoomiyaha Ujeedada Guddiga-PATA.
Mr. Joshi waxa la guddoonsiiyey abaal-marintii ugu sarreysey ee IIPT Champions in Challenge Award 2018 ka "Machadka Caalamiga ah ee Nabadda ee Socdaalka iyo Dalxiiska" ee ITCMS (Shirka Maareynta Dhibaatada Socdaalka Caalamiga ah) ee London, UK. Waa qofkii ugu horreeyay ee reer Nepal ah oo abaalmarintan qaata. Iyo, sidoo kale waxaa lagu abaalmariyay maamulaha ugu wanaagsan Aasiya qeybta guddiga dalxiiska qaranka.
Akhristaha iyo qoraaga aadka u jecel, Mr. Joshi wuxuu ku qoray dalxiiska arrimaha xulashada xaashiyaha qaranka, wuxuu gacan ka geystay buugga "Readings in Dalxiiska Miyiga" wuxuuna soo bandhigay waraaqo ku saabsan dalxiiska oo leh fikrado asal ah siminaaro iyo aqoon-is-weydaarsiyo Nepal iyo dibadda.
Mr. Joshi waa shahaadada Masterka ee cilmiga bulshada iyo shahaadada Masterka ee Maamulka Ganacsiga (MBA) ee Jaamacadda Tribhuvan, Kathmandu, Nepal. Mr. Joshi waxa uu caan ku yahay dhaq-dhaqaaqiisa, kaftan wanaagsan, u hurista dalxiiska iyo dabeecadda dhabta ah ee ka dhex jirta asxaabtiisa iyo la-hawlgalayaasha shaqada.
Wax badan oo ku saabsan Deepak Joshi